FSX Weather sano 2 7 bilood ka hor #854
Sababo qaar awgood, muuqaalka cimilada tooska ah aniga on FSX si xun ayaa khalad ah. Kaliya khalad ma ahan, laakiin meelna ugama dhowaan macquul, ama xitaa way saxantahay garoomada diyaaradaha qaarkood. Waqtigaan la joogo, inta badan garoomada diyaaradaha Yurub waxay wajahayaan daahitaan sababo la xiriira baraf culus.
Wixii faahfaahin dheeraad ah, EHAM Amsterdam .. waa run, cimiladu waa:
Dabayl 16 oo ka soo jeeda waqooyiga
Heerkulka 1 ° C
Cadaadis 972 hPa
Muuqaalka: 4000 m
Daruuraha kala firirsan ee xNUMX ft
Daadadka xNUMX ft
(iftiin) miro baraf ah
In FSX, hab ka duwan. Cirka cad, dabaysha kala duwan iyo kuleylka… waa maxay cadaabta? Ma jiraa waddo ku xeeran?
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: luc57
FSX Weather sano 2 4 bilood ka hor #941
Mashiinka Cimilada ee nooca loo yaqaan 'boxed' of FSX ma taageerto JESPEN oo ku siinaya cimilada nool. Waxaan u maleyn lahaa inay wali ku jirto barnaamijka Steam Edition ee la siinayo Dovetail oo ay qandaraas kula jirto. Adeeggu bilaash kuma aha Dovetail. Sida hadda oo kale FSW wali ma leh matoor cimilo firfircoon ama soo-saare dhinac saddexaad oo aad mid ka soo iibsan karto. Sida kaliya ee lagu heli karo cimilada adduunka dhabta ah FSX Daabacaadda 'Boxed', waa inaad iibsato mid lamid ah firfircoonida Sky 2016
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray DRCW.
FSX Weather sano 2 4 bilood ka hor #1013
Waxaan helay barnaamij cimilo bilaash ah - waa yar yahay oo wuxuu duraa cimilo nool FSX - FSXWX.
www.plane-pics.de/fsxwx / hoyga.htm
Uma baahnid inaad wax ku rakibto. Orod FSXBarnaamijka WX marka aad gasho FSX.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: DRCW
FSX Weather sano 2 4 bilood ka hor #1014
Bogga laguma gaari karo ..... tarjumaad, xiriiriye dhintay.
FSX Weather sano 2 2 bilood ka hor #1063
Hi Daaussssss. Ma hubo waxaad u jeeddo. Xiriiriyaha ayaa u muuqda inuu aniga hadda shaqeynaya.
Waxaa laga yaabaa in midkani, (meesha laga soo dejiyey dhabta ah). www.plane-pics.de/fsxwx / tilmaam-fsx.htm
FSX Weather sano 2 2 bilood ka hor #1064
Xidhiidhkani wuxuu ii shaqeeyaa laakiin waxaan ku talin lahaa www.fsrealwx.net/
Waxaan u adeegsanayaa waxayna ku siineysaa xaaladaha cimilada dhabta ah .. mar kasta.
Waxaad isticmaali kartaa qaybta bilaashka ah ama waxaad ku cusbooneysiin kartaa barnaamijka.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: goffers